ငါတစ်လလျှင် 40 000 $ ဆေးခြောက်ကိုမီးမရှို့ - လူတွေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "ငါသည်တစ်လလျှင် 40 000 $ ဆေးခြောက်ကိုမီးမရှို့ - လူတွေ
ငါတစ်လလျှင် 40 000 $ ဆေးခြောက်ကိုမီးမရှို့ - လူတွေ
Scotty အန္ဒြေ, CNN သို့အားဖြင့်
(က CNN) - သူ Mike တိုင်ဆန်ဆေးခြောက်ဘို့သူ့မေတ္တာချစ်ရန်တွန့်ဆုတ်မထားဘူး
ခေါင်းစဉ်တနင်္လာနေ့ရဲ့ Podcast တခုကို၏ဇာတ်လမ်းတွဲ, "သူ Mike တိုင်ဆန်နှင့်အတူ Hotboxin ''," က psychoactive မူးယစ်ဆေးများအတွက်သုံးစွဲဘယ်လောက်ဟောင်းတဦးဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံအားဖြင့်မျှဝေခဲ့သည်။
"ဘာကျနော်တို့တစ်လဆေးလိပ်သောက်?" သူသည်မိမိအ Co-အိမ်ရှင် Eben Britton ဟောင်း NFL ကစားသမားဆေးခြောက်နောက်ခံလူဖြစ်လာခဲ့သည်ဟုမေးပြောပါတယ်။ "40 000 တစ်လဒေါ်လာ Is?"
"ကျနော်တို့ကမွေးမြူရေးခြံမှာတစ်လလျှင်ပေါင်းပင် 10 တန်ချိန်ဆေးလိပ်သောက်," Britton US မှာရှိတဲ့ Mojave Desert မှာတည်ရှိပါတယ်တိုင်ဆန်မွေးမြူရေးခြံ, evoking ကပြောသည်။
နှစ်ဦးစလုံးခန့်မှန်းချက်သည်အလွန်မတူကွဲပြားနေသောခေါင်းစဉ်: ဆေးခြောက်တစ် 8 ဂရမ် 10 တိုတောင်းတန်ချိန်ထက်ပိုမို 70 သန်းကိုကိုယ်စားပြုဒေါ်လာ။ တိုင်ဆန်၏ခန့်မှန်းချက်, 40 000 ဒေါ်လာနေ့စဉ်5အကြောင်းကိုတစ်လလျှင် 000 170 လျောက်ပတ်သောအရွယ်ဆေးခြောက်စီးကရက်ခန့်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။
သူ Mike တိုင်ဆန်သောကြာနေ့သြဂုတ်လအပေါ်အနုပညာရှင်ဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲတိုင်ဆန်မွေးမြူရေးခြံအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြာပါသည်။ ဒါနပွိုင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ 2, 2019 ။ (ဝီလီ Sanjuan နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ / invisible / AP) ကို
တိုင်ဆန်သာမေးမှတ်ချက်ချပြောဆိုလိုက်တာပါ 10 တန်ချိန်ဝေဖန်မထားပါဘူး: "? ဒီအရူးရှိ၏"
မိမိအဧည့်သည်, ရက်ပ်ဂျင်မ်ဂျုန်း, မျက်လုံးကျယ်လာပြီး။ "ဒါဟာပေါင်းပင်တွေအများကြီးဖွင့်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ဒါဟာဒုတိယဖို့ပေါင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ "
မကြာမီတွင်အပန်းဖြေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားဆေးခြောက်ဥပဒေများကိုအင်အားစုသို့ entry ကိုအပြီး, 2018 အတွက်တိုင်ဆန်ဆေးခြောက်ပန်းပွင့်, အစွမ်းထက်ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူမကြာမီစားသုံးနိုင်သောထုတ်ကုန်များ၏ကိုးအမျိုးပေါင်းကမ်းလှမ်းထားတဲ့တိုင်ဆန် Ranch, စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားစီးတီးအနီးတွင်တည်ရှိပြီးယင်း 20 ဟက်တာဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်း၏ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများအပြင် "glamping" ဟုစက်ရုံ-based ထုတ်ကုန်စားသုံးနိုင်သောဆေးခြောက်, ပွဲကြည့်စင်များနှင့်စခန်းချနေရာများပါဝင်သည်။
™ & © 2019 Cable ကိုသတင်းကန်ြယက်, Inc တစ် Time Warner ကိုကုမ္ပဏီ။ All rights reserved ။
Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီ Ibiza ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုခရီးစဉ်ပူဇျောပါပွီ
Les accusations d'achat d'Iphone en second lieu sont rejetées, le carton pour téléphone portable Kumalasari devient la vedette – VIDEO
RDC : l’Agence nationale de renseignement demande un audit sur les finances des ministères – JeuneAfrique.com
Essai : « Un village à l’heure coloniale », plongée dans le quotidien de l’Algérie française – JeuneAfrique.com
ဗေဒင်: နောက်ကျော၌သင်တို့ကိုထုတ်ချင်းခပ်ထိုးနိုင်သစ္စာဖောက်ဖြစ်ကြောင်း3ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာ - နောက်ထပ်ကျန်းမာရေး MAG
ခြေလျင် OM - OM: ဒါဟာအမှန်တကယ်အက်ကွဲရဲ့ Marseille လုံးဝကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရှိရမည် - ခြေလျင် 01
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,144
TECH & Telecom1,559